စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ - သင့်ရဲ့အပိုဆု Choose
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – သင့်ရဲ့အပိုဆု Choose
ဒီမြှင့်တင်ရေးအသက်ကြီးတရားဝင်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှသာရရှိနိုင် 18 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို.
ဒီဆုကြေးငွေ 26 ဇန်နဝါရီမှ 1st ဖေဖေါ်ဝါရီလအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 2017 GMT.GMT ACST -9.30hrs ၏ညီမျှသည်, ဒီနည်းကို -1hr, PTZ + 8£ 10 နိမ့်ဆုံး hrsDeposit နှင့်တစ်ဦးအရ 50% £ 200 ကျော်£ 100 ကို OR သိုက်မှတက်သိုက်ပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေများနှင့်ရ 10% ငွေသား£ 25 အထိ.
အပိုဆုသို့မဟုတ်ငွေသားအထိကြာလိမ့်မည်330x သင်တို့၏ account.Standard အာမခံလိုအပ်ချက်များအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မြှင့်တင်ရေးရဲ့အဆုံးကနေအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံးဆုကြေးငွေပမာဏကိုဆုကြေးငွေရှေ့တော်၌လျှောက်ထားသို့မဟုတ်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာအနိုင်ရရှိထုတ်ယူနိုင်ပါသည်.
ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေကနေအများဆုံးကူးပြောင်းငွေပမာဏ 4X မှာချီးမြှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုမိနစ်မှာပါလိမ့်မည်.
အခမဲ့ဂိမ်းများအတွက် Play စအပေါ်လုပ်အာမခံထိုအာမခံလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်ရေတွက်မည်မဟုတ်.
ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “ငါ့အကောင့်” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း.
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အ Condtion-အပ်နှံနှင့် Get 25 လှည့်ခြင်းများ
စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ – စိန့်ပက်ထရစ်နေ့ 50% ဦးဝင်း Boost
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – 50% £ 500 မှနေ့စဉ်ပွဲစဉ်ကိုတက်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – Tuesday Match – 50%…
စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ – အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် –…